April 10, 2021 - Babal Khabar
हिन्दु धर्ममा महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिएको छ । जुन घरमा महिलालाई पुरै सम्मान मिल्छ उसको घरमा कहिल्यै पनि धनको कमी हुँदैन । लक्ष्मी त्यही निवास गर्छिन्, जहाँ महिलाको इज्जत हुन्छ । घरमा स्त्रिले गरेको साना साना कार्यले पुरै परिवारमा प्रभाव पर्छ । आउनुहोस् केहि यस्ता उपाय बारे चर्चा गरौ, जसको कारण धन र समृद्धि हुन्छ । वास्तुशास्त्र अनुसार रातको समयमा कसैको घरमा दुध माग्न जानु हुदैँन् । नत रातको समयमा कसैलाई दान दिनु हुन्छ । रातमा दान दिदा पैसाको अभाव हुनसक्छ ।भान्छामा जुठो भाडा राख्नु हुदैँन । भान्छा सफा राख्नुपर्छ । यसले घरमा सुख सम्बृद्धि बन्छ र नकरात्मक ऊर्जा घरबाट भाग्छ । बेलुकीको सायमा तुलसीको विरुवाको नजिक कहिल्यै पनि बत्ती बाल्नु हुँदैन । यसो गर्दा घरमा झगडा हुने धेरै संभावना हुन्छ । बत्ती बाल्दा परिवारमा रोगको प्रकोप बढ्न पनि सक्छ । रातको समयमा महिलाले कपाल खुला गरेर कहिल्यै स
नेपालमा एकसिंगे गैंडाको संख्या बढेर यति धेरै पुगेछ हेर्नुहोस् ।
काठमाडौँ — नेपालमा एकसिंगे गैंडाको संख्या बढेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसहित गैंडा पाइने देशका विभिन्न निकुञ्जमा ६ वर्षपछि भएको गणनामा संख्या ७ सय ५२ पुगेको हो । सन् २०१५ को गणनामा नेपालमा ६ सय ४५ वटा गैंडा थिए । सन् २०१५को तुलनामा १ सय ७ वटा गैंडा नेपालमा बढेको प्रकृति संरक्षण कोषका प्रवक्ता एवं गैंडा विज्ञ नरेश सुवेदीले इकान्तिपुरलाई बताए । गैंडा गणना २०७७ अनुसार चितवनमा गैंडाको संख्या ६ सय ९४, शुक्लाफाटामा १७ वटा, बर्दियामा ३८ वटा र पर्सामा ३ वटा गैंडा रहेको सुवेदीले जानकारी दिए । गत चैत ९ गते वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सिटी फुकेर राष्ट्रिय गैंडा गणना २०७७ को उद्घाटन गरेका थिए । बर्दियामा चैत १७ र शुक्लाफाँटामा १९ गतेबाट गणना सुरु भएको थियो । गैंडा गणनामा दुई सय जनाजति कर्मचारी, प्राविधिक र पशु स्वास्थ्यकर्मीहरू जुटेका थिए । गैंडाको मुख्य बासस्थल चितवन निकुञ्ज भए पनि पर्सा, बर्द
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्नु यस्ता छन् कारण : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले २५ प्रतिशत नपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिएको बताएका छन् । शनिबार माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले अविश्वासको प्रस्तावमा ठोसरुपमा कतैबाट समर्थन पाउन नसकेको खुलासा गरेका हुन् । उनले आफूहरुले फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाइराख्नुपर्ने बताए । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आवश्यक रहेको, समाजवाद निर्माणका निम्ति विशाल कम्युनिस्ट समर्थक जनतालाई एकताबद्ध गर्न आवश्यक भएको बताए । विभिन्न पार्टीहरुबीच माेर्चा बन्ने प्रचण्डकाे भनाइ थियाे । “मोर्चा त बन्छ, बन्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । हामीहरु र नेकपा एमालेभित्रको एउटा पक्षसँग मोर्चा त बनिरहेकै छ । जसपाका नेताहरुसँग हाम्रो वेभ लेन्थ धेरै न
दाइले चिकेन ल्यएपछी २ महिनादेखि कोमामा भएका भाईको , कसरी खुल्यो होश हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं । कोमामा भएका ब्यक्ति आफुलाई मन पर्ने खानाको स्वाद पाएर होश फर्किएको कहिल्यै सुन्नु वा देख्नु भएको छ ? ताइवानको सिन्चू काउन्टीमा यस्तै अनौठो घटना घटेको छ । सिन्चू काउन्टीमा बस्ने १८ वर्षे चियूको यसवर्षको जुलाईमा स्कुटर दुर्घटनामा परेपछि उनी कोमामा गएका थिए । सडक दुर्घटनामा उनको शरीरको भित्री अंगमा गम्भीर चोट देखिएको थियो । तोन एन जनरल हस्पिटलको आइसीयूका निर्देशक सेय सुङ सिनका अनुसार अस्पतालमा उनका अगाडी उनका दाईले म तिमीलाई तिम्रो मनपर्ने चिकन फिलेट खुवाउँदैछु भने लगत्तै उनको होश आएको बताइएको छ । चिकेनको कुरा गरे लगत्तै उनको पल्स बढ्न थाल्यो र बिस्तारै उनको चेतना खुल्न थालेको तोन एन जनरल हस्पिटलको आइसीयूका निर्देशक सेय सुङ सिनले उल्लेख गरेका छन् । अस्पताल भर्ना गरेको ६२ औँ दिनमा उनको होश आएको बताइन्छ ।
विकास विरोधी र मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नेहरु ‘सकुनी’ हुन् ‘ : प्रधानमन्त्री ओली
विकास विरोधी र मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नेहरु 'सकुनी' हुन् ' काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास विरोधीहरु सरकार परिर्वतनको खेलमा लागेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५ औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास विरोधीहरु सरकार परिर्वतनको खेलमा लागेको दाबी गरेका हुन् । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण, अस्पताल र बाटाहरु निर्माणका लागि सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरे । विकास विरोधी र मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नेहरुले सरकारको विकल्प खोज्नेतर्फ उन्मुख भएको भन्दै उनले त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई “सकुनी”को संज्ञा दिए । उनले संसदीय अंकगणितलाई दुरुपयोग गर्ने “सकुनीका गोटी ”नै आफूले फ्याँकिदिने चेतावनी दिए । उनले भने,“सरकार परिर्वतनका प्रयासहरु भइ
पार्टीमा हाम्रो यस्तो कमाण्ड देखेपछि ओली अत्तालिए ,अनि जालझेल सुरू गरे : प्रचण्ड
काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा हुँदा आफूलाई एमालेका नेता कार्यकर्तानै पार्टीमा नयाँ अर्को मदन भण्डारी भेटियो भनेर उत्साहित दावी गरेका छन् । एमाले कार्यकर्ताले प्रचण्डमाथि ठूलो विश्वास गरेपछि केपी ओलीले प्रतिगामीहरुसँग मिलेर आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको उनको दावी छ । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली सम्पर्क समितिद्वारा आयोजित भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफू नेकपामा बलियो हुँदै गएपछि ओलीले प्रतिक्रान्तिकारीहरुसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । ‘कमरेड तपाईँले पार्टी चलाएको देखियो, अर्को मदन भण्डारी भेटियो । पार्टीमा हाम्रो यस्तो कमाण्ड देखेपछि ओली अत्तालिए । अनि जालझेल सुरू गरे’, प्रचण्डले भने । उनले ओली सरकारलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिन नहुने भन्दै काँग्रेसले सरकार ढाल्न तत्परता देखाएको र जसपाले पनि पार्ट
अलिबाबा कम्पनीलाई २ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर जरिवाना गर्नुमा यस्तो रहिछ कारण
काठमाडौँ — चीनले ई–कमर्स क्षेत्रको शक्तिशाली कम्पनी अलिबाबामाथि एकाधिकार नियमहरु उल्लंघन गरेको आरोपमा २ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर(करिब ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना गरेको छ । यो रकम चीनमा कुनै पनि कम्पनीमाथि भएको आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो । यसअघि सन् २०१५ मा अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी क्वालकमले ९७ करोड ५० लाख डलर जरिवाना तिरेको थियो । क्वालकममाथि चीनमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने कार्यमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप लागेको थियो । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अलिबाबाले सन् २०१९ मा गरेको आम्दानीको करिब ४ प्रतिशत जरिवानामा बुझाएको छ । चीनको बजार नियमनकारी निकाय स्टेट एडमिनेस्ट्रेसन फर मार्केट रेगुलेसन(एसएएमआर)गत डिसेम्बरमा अलिबाबामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । एसएएमआरले अलिबाबाले चीनको 'एन्टी-मोनोपोली' कानुन उल्लंघन गरेको बताएको छ । अलिबाबाले चिनियाँ सामाजिक सञ्‍जाल वेइपोमार्फत एसएएमआरको निर्
पद गुमाएका चारै जना सांसद र मन्त्रीलाई किन ओलीले तत्काल पुनर्नियुक्ति गरे हेर्नुहोस् !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर गत फागुन २८ गते नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदको सांसद पदसँगै मन्त्री पद समेत गुमाएकाहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले तत्काल मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । बिहीबार सभामुख अग्नि सापकोटाले चार मन्त्रीले दल त्याग गरेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएलगत्तै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको दुवै पद खोसिएको थियो । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका उनीहरुको पद गुमेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारै उनीहरुको पुनर्नियुक्तिबारे आफु निकटका नेताहरुसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनीहरुको पुनर्नियुक्ति गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएको सहभागी एक नेताले बताए । २०७४ सालको निर्वाचनमा टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची, लेखराज भट्ट कैलाली–४, प्रभु साह रौतहट–३ र गौरीशंकर चौधरी कैलाली–३ बाट नेकपा माओवाद
यस कारण केपी ओलीको सरकार धेरै दिन नटिक्ने प्रचण्डको दाबी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले केपी ओलीको सरकार धेरै दिन नटिक्ने दाबी गरेका छन् । शनिबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको परिषद बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नयाँ सरकार बनेपछि महँगी घटाइ कर्मचारीलाई साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रचण्डले कर्मचारीको आफ्नै सीमा र मर्यादा भएकोले विवेक पुर्याएर अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा लड्न आह्वान गरे । देशमा बढिरहेको बेथितीको अन्त्य गर्ने प्रमुख दायित्व कर्मचारीको भएकोले राष्ट्रिय हितको पक्षमा लड्न आग्रह गरे । उनले फेरि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै मजदुर, किसानलाई दुःख नदिइकन आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । अब केही दिनमा नयाँ सरकार बन्छ भन्नेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गरे । “केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र सबै कालो बादल हट्छ भन्नेमा म आशावादी छु । त्यो प्र
भाइरल रोगले एक्कासि विद्यार्थीहरु बिरामी पर्न थाले
बाजुरा / बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिका–१ डुङ्ग्रीमा पर्ने धुरालसैन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थी लगातार चार दिनदेखि भाइरल रोगका कारण बिरामी पर्न थालेपछि विद्यालय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्रा विद्यालय आएपछि धमाधम बिरामी पर्दै घर जान थालेपछि विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक महासिं थापाले बताए । उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत करीब एक सय बढी विद्यार्थी तीन दिनयता बिरामी परेका छन् । विद्यार्थीमा रुघाखोकी, ज्वरो र टाउको दुख्ने समस्या देखिएको धुरालसैन माविका शिक्षक सुरेन्द्र रौलेले जानकारी दिए । तीन दिनयता विद्यार्थी बिरामी हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।दैनिक रुपमा २० जना बढी बिरामी हुने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक थापाले बताए । बिरामी भएका विद्यार्थी घरबाट नआउने भएपछि विद्यालय नै बन्द गर्ने पर्ने अवस्था आएको प्रअ